Dagaalyannada Al shabaab oo dagaal kula wareegtay deeganka Ceelka Geelow ee duleedka Balcad – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDagaalyannada Al shabaab oo dagaal kula wareegtay deeganka Ceelka Geelow ee duleedka Balcad
Hiiraan Xog, jan 14 ,2018:- iska horimaad khasaaro geystay ayaa Ciidamada dowlada iyo Al shabaab ku dhaxmaray deeganka Ceelka-Geelow oo u dhexeeysa Magaalada Jowhar iyo Balcad ee gobolka shabeellaha dhexe.
Dagaalka ayaa bilowday kadib markii dagaalyaano ka tirsan ururka Al shabaab ay weerar ku qaadeen farisin Ciidamada dowlad ay ku lee yihiin deeganka Ceelka Geelow oo ku dhow Magalaada Balcad.
Wararka qaar ayaa sheegay in dagaalyannada Al shabaab ay la wareegeen gacan ku heynta deeganka Ceelka Geelow ee gobolka shabeellaha dhexe islamarkana isku xira Balcad iyo jowhar.
Xildhibannada Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in Madaxda Maamulka looga bahan yahay inay wax ka qabtan amaan darrada ka jira wadada isku xirta Magaalooyinka Muqdisho iyo jowhar,islamarkana la geeyo ciidamo xoog badan.
kooxo hubeysan oo Askari ka tirsana Ciidamada dowlada ku dilay Magaalada Baladweyne